VaChidyausiku Vanoramba Kuti MDC T Ibvise Nyaya Yayo Mudare
WASHINGTON DC — Dare repamusorosoro raramba neMuvhuro danho remutungamiri weMDC T, VaMorgan Tsvangirai, rekubvisa mudare iri nyaya yavo yekupikisa zvakabuda musarudzo.
Mushure mekunzwa zvikonzero zveMDC T zvakapa kuti ibvise nyaya yayo mudare iri, mukuru wedare iri, Chief Justice Godfrey Chidyausiku, nevamwe vavo vasere vanonzi vaenderera nenyaya yakaturwa mudare. VaChidyausiku vanoti vachapa mutongo wavo neChipiri.
VaTsvangirai vari kumirirwa naAdvocate Deepak Mehta naVaChris Mhike.
Zvinonzi dare iri ratiwo danho raVaTsvangirai rekuedza kubvisa nyaya yavo kudare harisi pamutemo zvichitariswa bumbiro remitemo, izvo zvaita kuti dare rienderere mberi nekunzwa nyaya iyi.
VaTsvangirai vakatora danho rekubvisa nyaya yavo kudare vachiti vakanga vanyimwa humbowo hwavaida hwekushandisa munyaya yavo yekupikisa zvakabuda musarudzo.
Mutauriri weMDC T, VaDouglas Mwonzora, dare riri kuda kuvamanikidza kupinda munyaya yavati vabuda mairi.
Zvichakadaro, vatungamiri venyika dzemuSouthern African Development Community,
SADC, vanonzi vakatambira zvakabuda musarudzo dzemuZimbabwe pamwe nekukurudzira nyika dzakatemera VaMugabe nevamwe vavo zvirango kuti dzizvibvise.
Vachitaura neMuvhuro mukupetwa kwemusangano weSADC Summit wakanga uri kuLilongwe kuMalawi, mutungamiri weMalawi, uye vari ivo sachigaro mutsva weSADC, Amai Joyce Banda, vakati vanofunga kuti vana veZimbabwe vakanga vatambura zvakakwana kuburikidza nezvirango.
Sangano iri rakakorokotedzawo Zimbabwe nekuita sarudzo murunyararo pamwe nekukorokotedzawo VaMugabe nekukunda musarudzo.
Masangano akawanda akazvimirira akatumira nhume kuMalawi kuti dziedze kuonesa SADC mafambisirwo akaitwa sarudzo idzo dzinonzi dzakabiriridzirwa, kunyange hazvo dzichinzi dzakaitwa murunyararo.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network, ZESN, Doctor Solomon Zwana, vanoti danho reSADC iri nderekuda kuti ibude munyaya yeZimbabwe, asi rinogona kukanganisawo maitirwo esarudzo munyika dzakawanada dzedunhu reSADC.
Mutauriri weMDC T, VaDouglas Mwonzora, vatsinhirawo maonero aVaZwana vachiti vatungamiri venyika dzemuSADC vari kuda kungobvisa nyaya yeZimbabwe pamatafura avo.